मैले बारम्बार परीक्षा दिईरहनु परेको छ– शिव परियार - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
मैले बारम्बार परीक्षा दिईरहनु परेको छ– शिव परियार
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १५:४८
गायक शिव परियार यतिबेला आफ्नो एघारौँ र बाह्रौँ एल्बमको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाली गीतसंगीतमा केही योगदान पुग्ने गरी उनले यी दुई एल्बममा गीतहरु समावेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसका साथै सांगीतिक कार्यक्रमको शिलशिलामा उनको देश विदेशको यात्रा पनि भईरहेको छ । व्यस्तताका बावजुत पनि उनले आजको गफगाफलाई अलिकति समय दिएका छन् । लोकराज अधिकारीले शिवसँग गरेको आजको गफगाफ ।
अचेल त शिव परियार ६ महिना जमिनमा ६ महिना आकाशमा हुन्छ भन्छन नि ?
हैन । अहिले सबैमा कामसँगै मनोरन्जन पनि गर्नु पर्छ भन्ने मैले पाएको छु । देश विदेशमा हुने सबै नेपालीको चेतनाको स्तर उकाशिएको महसुस गरेको छु । अनि जसले जनतालाई मनोरन्जन दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरु सबैजना अहिले व्यस्त नै हुनुहुन्छ । अहिले नेपालसँगै विदेशमा पनि काम गरिरहनु परेको छ ।
तपाईको एघारौँ एल्बम ‘शिवालय’को काम सकियो ?
म एघारौँ र बाह्रौँ एल्बम सम्भवत सँगै रिलिज गर्छु होला । शिवलाय पार्ट १ र २ भनेर । किनभने धेरै गीतको नाममा ‘शिवालय’ भनेर लेखिसकियो । त्यस कारण मेरो एघारौँ एल्बम यस्तो बनोस् भन्ने चाहना छ जसमा शिव परियारले आज भन्दा १२ वर्ष अगाडि साँच्चि नै नयाँ धारबाट गायन शुरु गरेको थियो भन्ने होस् । एउटामा ‘नभेटी नभेटी’ ‘छहरे खोला’, जस्ता माईलस्टोन गीत र अर्कोमा कन्सर्टमा जम्ने खालका गीतलाई मैले यी एल्बममा राख्ने कोशिश गरेको छु । एघारौँ र बाह्रौँ एल्बमलाई म यस्तो बनाउन चाहन्छु कि जसले भोलिको पुस्ताले समिक्षा गर्दा, शिव परियारलाई सम्झिँदा शिव परियारले आफूलाई मोडुलेट गरेर राम्रो खालको गीतहरु दिएको रहेछ है ! भन्ने होस् ।
पछिल्लो समयमा तपाईँ आफै निर्माता, कम्पोजर र गायक बन्नुभएको छ नि किन ?
सबै भन्दा मूलतः कुरा के थियो भने नेपाली संगीतमा तीनवटा विधाको समन्वयबाट संगीत सिर्जना हुन्थ्यो विगतमा । त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । संगीतकार, गायक र रचनाकार । यो तिन वटै त्रिवेणीको संयोजनबाट असाध्यै राम्रो तरिकाबाट संगीत सिर्जना भईराखेका थिए । त्यो एउटा स्तरमा थियो ।
शास्त्रिय संगीतको बारेमा केही पनि थाहा नभएको युवावस्थाको एउटा गाउँले ठिटो संगीत सिक्न होमियो । आठ दश वर्ष मैले संगीत सिकेँ । अब मैले काम गर्ने जमातको सन्दर्भमा मैले लगातार रियाज गरेको छु । लगातार संगीत पढेको छु । मैले पढेको संगीत, मैले पाएको शास्त्र, मैले पढेको संस्कार मैले अनुसारको चिजहरु खोज्दा कतिपय कुराहरुमा मलाई शुरुमा काम गर्न सहज भएन ।
कति मान्छेहरु एउटा मात्र गीत गाएर ठूलो भएका छन् । कतिपयलाई संगीतको बारेमा थाहा नै छैन । कतिलाई थाहा भएर पनि केही गर्न नसकेको अवस्था छ । अनि यस्तो अवस्थामा मलाई पनि लाग्यो । ओहो ! यो त ठूलो महासागर रैछ । यहाँ काम गर्न नजानेमा डुबिन्छ भन्ने चाहि एकपटक आफू डुबेर थाहा पाईयो । नेपाली गजलको एकल एल्बम गर्नको लागि गीत रेकर्ड गरियो । गजल लिएर विभिन्न कम्पनीहरु धाईयो । म रेडियो नेपालमा प्रथम भएपछिको कुरा हो यो । तर कोही पनि कम्पनीले त्यो एल्बममा स्पोन्सर गर्न नमानेपछि म निकै निराश भएको थिएँ । त्यसपछाडि पछि मैले नेपाली संगीत प्रतिको सोचलाई उल्टो किसिमले सोच्न थालेँ र अहिले त्यही किसिमले काम गरिरहेको छु ।
शिव परियार गायनको माध्यमबाट आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुभएका कारण अहिले आफै लगानी गर्न थाल्नु भएको हो ?
त्यो पनि एउटा पाटो हो । तर अर्काको बाटो कुरेर बस्दा संगीत समयमा राम्रो पाईदो रहेनछ । मैले शब्दको लागि पनि धेरै समय पर्खेर बसेको छु । शब्दको सवालमा म त कुर्ने गर्छु । तर संगीत र लगानीको कुरामा चाहि के लाग्छ भने बिउ रोपेपछि मात्र फल्छ । बरु बालुवामा पानी हाल्ने खालको काम नगरौँ । ६ महिनै लाएर काम गरौँ । त्यो कामबाट राम्रो उपलब्धी होस् । त्यसलाई फेरि अर्कोमा लगानी गर्न सकयोस् । आज एउटा गीतमा पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि म निर्धक्क छु । त्यो मेरो आफ्नो काम प्रतिको विश्वास पनि हो । आफूले गरेको काममा विश्वास गर्न सक्ने भयो भने पनि राम्रो पनि हुने रहेछ ।
अनि मैले बारम्बार परीक्षा दिईरहनु परेको छ । अरुले चाहि एक चोटी गरिसकेपछि सबै काम पाउने । सबै राम्रो हुने । म चाहि खै किन हरेक पटक परीक्षा दिईरहेको अनुभव गर्छु । सबै कुरा राम्रै छ । यो उद्योगमा पनि सबैसँग राम्रै सम्बन्ध छ । तर मलाई हरेक पटक परीक्षा दिईरहनु परेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने मैले आफ्नो काम र लगानी गरेको छु । नेपाली संगीतलाई सेवा गरेको छु ।
शिव परियारको केही गीतहरु भोजपुरी र हिन्दीमा कपि भएका छन् । त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो मैले मेरो जविनमा पाएको ठूलो सफलता हो । भारतमा नगई नेपाली गीतसंगीत चाहि भारतमा कपी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिती हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ । मेरो ‘पिउँदिन भन्दा भन्दै’ कपी भएको छ । यसको श्रष्टा निहारिका शाहि ज्यू, हाम्रो सङ्गीतकार तारा प्रसाद लिम्बू र म हामी तिनै जनाको काम । त्यसपछि विशाल भण्डारी जीको भिडियो निर्देशनमा अनु शाह र पुष्पलको एक्टिङ्ग छ यस गीतमा । यो सबै प्याकेजमा एक किसिमको मजा छ । राजन ईशान जीको संगीत संयोजन छ । यसलाई सबैले अत्यधिक रुचाईदिनु भयो । अनि यसरी हामीले लानै नपरेर विदेशमा गीत चोरी हुनुले हामीले पनि हाम्रो संगीतलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन सक्ने रहेछौँ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
‘लव डायरीज’को घोषणा, नयाँ अवतारमा देखिए शुशिल श्रेष्ठ